5 aghụghọ na-atọ ụtọ iji nweta ihe kachasị mma na Kindle gị Akụkọ akụrụngwa
Taa ndị Ngwurugwu Amazon Ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ewu ewu eReaders ma ọ bụ akwụkwọ elektrọnik na ahịa, n'ihi atụmatụ ha na-abawanye ụba, njirimara ha na nkọwa ha, mana karịa ihe niile na n'ọtụtụ oge ekele maka ọnụahịa ha. Ugbu a n'ahịa, e nwere nnukwu ezinụlọ nke ngwaọrụ ndị dịnụ, dị maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla yana ọtụtụ ọrụ na nkọwapụta ị nwere ike ịhọrọ dịka nkasi obi gị.
Ọ bụrụ na ị nwere Oindind Oasis, a Kindle Voyage, a Kindu Paperwhite, ihe bụ isi ma ọ bụ ọbụnadị nke ọzọ Kindle nke Amazon malitere na ahịa kemgbe akụkọ ntolite ya, taa anyị ga-egosi gị 5 aghụghọ na-adọrọ mmasị iji nweta ọtụtụ n'ime Kindle gị site na Amazon, nakwa na ị nwekwara ike ịba nnukwu uru na ya, ọ bụghị naanị ịgụ akwụkwọ dijitalụ dị iche iche.
1 Zipu ibe weebụ ọ bụla na Kindle gị
2 Zipu akwukwo dijitalụ na Kindle gị site na email
3 Nye onye ọ bụla ịchọrọ akwụkwọ dijitalụ
4 Were nseta ihuenyo gị Kindle
5 Tọgharia oge fọdụrụ maka akwụkwọ
Zipu ibe weebụ ọ bụla na Kindle gị
Ebe ọ bụ na azụrụ m Kindle ngwaọrụ m, afọ ole na ole gara aga, otu n'ime nhọrọ kachasị amasị m bụ ike zipu ibe weebụ ọ bụla na ngwaọrụ Amazon m, site na ama m ma ọ bụ site na kọmputa m, ka ị gụọ ma e mesịa.
N'ọtụtụ oge n'ụbọchị, m na-eziga isiokwu ndị masịrị m ịgụ mgbe m dinara na sofa kwa abalị na ebe m nwere ike ịgụ akwụkwọ nke ọma na-ahapụghị anya m, ma karịa obi iru ala.
Iji nwee ike iji aghụghọ a, ị ga - etinye mgbakwunye Ziga na Ihe Nlegharị na ihe nchọgharị Google Chrome gị. N'ezie, iji gụọ isiokwu ndị ezitere na Kindle gị, ị ga-enwerịrị ya jikọọ na netwọk nke netwọkụ ma mekọrịta ya ka ọ na-enweta ozi ahụ kwa ụbọchị.
Budata - Ziga na Ihe Nlegharị
Zipu akwukwo dijitalụ na Kindle gị site na email
Amazon Kindle bụ otu n'ime ngwaọrụ ole na ole na ahịa nke anaghị eji usoro epub maka akwụkwọ dijitalụ, Na-ahọrọ kemgbe oge ochie maka AZQ. Nke a gụnyere nsogbu nke ịnwegharị eBooks n'ọtụtụ oge iji nwee ike ịnụ ụtọ ha na ngwaọrụ anyị site na ụlọ ọrụ Jeff Bezos duziri.
Iji mee nke a, enwere ọtụtụ nhọrọ dịka Caliber, mana ọ ga-ekwe omume izipu akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla site na email nke aka anyị, nata ya agbanweelarịrị na usoro dakọtara na Kindle anyị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ imezu aghụghọ a, ị ga - etinye ya ma zipu ya na adreesị ozi-e nke ọ bụla Kindle kenyere na ị ga - ahụ na ozi nke ngwaọrụ gị ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ Amazon, site na ebe ị nwere ike ijikwa ngwaọrụ.
Nye onye ọ bụla ịchọrọ akwụkwọ dijitalụ
Ọ bụrụ n ’ị chere na n’ i nwere Kdị Omume ị gaghị enwe ike ịhapụ eBooks gị n’aka enyi ọ bụla ma ọ bụ onye ezinụlọ gị, ụdị ahụ anaghị enye gị akwụkwọ ndị ahụ ma ọ bụ nyeghachi gị ya afọ ole na ole ị binyechara ego ha, ị na-na na na na-ezighi ezi. Ma nke ahụ bụ site na e-book ọ bụla Amazon anyị nwere ike ibinye enyi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ akwụkwọ dijitalụ, n’enweghị nsogbu ọ bụla, ọ bụ ezie na nke ahụ adịghị mfe dị ka a ga-asị na ọ bụ akwụkwọ n’ụdị usoro.
Iji nwee ike ịgbazinye akwụkwọ, a ga-etinye ya na ndepụta nke Amazon nwere maka onye ọrụ ọ bụla ma tinye ya n'ime ọrụ «Lending Enyere». Enwere ike ịgbazite akwụkwọ ọ bụla nwere ozi a maka izu abụọ na akwụghị ụgwọ ọ bụla. Mgbazinye ego sitere na ibe Jikwaa gị Amazon Kindle, ebe naanị ị ga-egosi akwụkwọ ị chọrọ ibinye na onye ịchọrọ ịhapụ ya izu ole na ole.
Amazon ekwuolarị na ọ na-arụ ọrụ na ịme akwụkwọ dijitalụ ya niile enyere onye ọ bụla enyi ma ọ bụ onye ezinụlọ ya, ọ bụ ezie na n'oge ahụ ọ dị ka ọ ka dị ogologo oge tupu nke ahụ eme, ọbụlagodi n'ụzọ iwu.
Were nseta ihuenyo gị Kindle
Otu n'ime usoro aghụghọ kachasị mma anyị nwere na Kindle anyị, na ọtụtụ ndị ọrụ amaghị nke ọma, bụ inwe ike nseta ihuenyo nke na-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, ịchekwa otu peeji nke akwụkwọ anyị na-agụ. rue mgbe ebighebi.
Dabere na nsụgharị nke Kindle anyị nwere n'aka anyị, a na-ejide ihuenyo ahụ n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Na nchịkọta ụdị n'okpuru anyị na-egosi gị esi ewe nseta ihuenyo na ụdị dị iche iche nke Amazon eReader;
Original Kindu, unu si 2, Kindle DX na unu si n'ihe unu na keyboard: iji nweta nseta ihuenyo ahụ anyị ga-ejide ala na keyboard Alt-Shift-G
Isi 4: pịa ma jide bọtịnụ ụlọ na bọtịnụ igodo n'otu oge
Obi ebere: nke mbụ, anyị ga-ejide bọtịnụ mmalite wee metụ ihuenyo ahụ aka inweta nseta ihuenyo nke ihuenyo ahụ
Gbasara akwukwo Paperwhite, Achọpụta (2014): Ngwaọrụ abụọ a enweghị bọtịnụ nkịtị ka Amazon wee chee ụzọ ọzọ iji nweta nseta ihuenyo. Ọ bụrụ na anyị chọrọ onyogho nke ihe anyị na-ahụ na ihuenyo ahụ, ọ ga-ezuru iji n'otu oge pịa n'akụkụ abụọ nke ihuenyo ahụ
Obi iru ala: anyị nwere ike iwe nseta ihuenyo dị ka Paperwhite site n'otu oge imetụ n'akụkụ abụọ nke ihuenyo ahụ
Ọdịdị Omenala: a na - ewepu nseta ihuenyo ahụ dị na Voyage site na ịpị aka n'akụkụ abụọ nke ihuenyo ahụ n'otu oge
Tọgharia oge fọdụrụ maka akwụkwọ
Otu uru dị ukwuu nke ọtụtụ akwụkwọ elektrọnik na ahịa, gụnyere Kindle, bụ ohere ịhụ n'oge niile na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ, oge na ibe anyị ga-emecha akwụkwọ a. Igosi peeji nke anyị chọrọ iji mechaa akwụkwọ a abụghị ihe dị mgbagwoju anya maka ngwa ọ bụla, mana ịgbakọ oge anyị kwesịrị imecha ya bụ ihe na-adịchaghị mfe.
Kdị ahụ iji gosi anyị oge a dabere na ọsọ ọgụgụ na ụfọdụ algọridim ndị ọzọ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị onye na-aghọta, belụsọ anyị chere ụfọdụ ndị nrụpụta Amazon ọzọ. Na nwute, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na ụfọdụ eBooks, ọkachasị ndị azụtara na mpụga Amazon.
Luckily, e nwere abụghị nke ukwuu nsogbu resetting a ọnụ ọgụgụ nke oge anyị na-ekpe na-na njedebe nke akwụkwọ. Iji mee nke a anyị ga-emeghe search engine nke anyị si n'ihe unu na ọ bụrụ na ị dịghị mgbe eji ya bụ na elu ihuenyo, na pịnye "; ReadingTimeReset" ịkwanyere semicolon mbụ na mkpụrụedemede ukwu.
Echegbula onwe gị na ozi ọ bụla ma ọ bụ nsonaazụ ọ bụla agaghị apụta, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla ga-egosipụta ma a ga-emegharị counter ahụ, nke bụ ihe anyị chọrọ ime.
Anyzọ aghụghọ ndị a ọ bụla enyerela gị aka ịfanyekwu obere ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị dị n ’ọ dabara?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » 5 aghụghọ na-adọrọ mmasị iji nweta ọtụtụ n'ime Kindle gị
Chuwi Hi10 Plus nyochaa na keyboard mpụga